समानान्तर Samanantar: कांग्रेसका समस्या
कम्युनिस्टहरूको सिको, व्यक्तिगत स्वार्थ र भिडबाट निर्देशित भएर भित्र्याइएको पदाधिकारी निर्वाचनको ‘पराइ' संस्कारले नेपाली कांग्रेसलाई समस्याको भुमरीमा पार्ने लक्षण देखिइसकेको छ। पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा समूह बनाउनु उचित थिएन। यस अभ्यासले विभाजनको तुस मेटिन दिएन। आउने दिनमा यो तुस 'भुसको आगो' पनि बन्नसक्छ।
कति दिन रहलान् दाहिने हात?
महामन्त्रीमा विमलेन्द्र निधिले जितेको भए त केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकदेखि नै अप्ठेरो पर्नसक्ने रहेछ। महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले 'सुशील कोइरालाको दाहिने हात' हुने घोषणा गरेका छन्। यस घोषणाले गणेशमान सिंह र विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको सम्बन्ध सम्झाउँछ तर, न सुशील बीपीजति विनम्र हुनसक्छन् न प्रकाश नै प्रतिबद्धताको पर्याय लौहपुरुष हुन्। यसैले दुवै पदाधिकारी साँच्चै संवेदनशील भएनन् भने तिनको सम्बन्ध बिग्रन बेरै लाग्नेछैन। यसै पनि प्रकाश सुशीलको खेमामा आएको र गएको मन नपराउने दुवै नेताका वरपर बग्रेल्ती नै छन्। यी दुवै विलक्षण नेतृत्व क्षमता भएका नेता पनि हैनन्। सधैँ नजिक रहेकाले चुक्ली लगाउन थालेपछि धान्न कठिनै हुन्छ। गिरिजाबाबु गणेशमानजीलाई बीपीसरहै सम्मान गर्थे। गणेशमानजी पनि गिरिजाबाबुलाई भातृवत् स्नेह गर्थे। तैपनि, यी दुईलाई कुरौटेले बझाएरै छाडे। सुशील र प्रकाशले यसलाई आआफ्नै कोणबाट हेरेका र बुझेका त होलान् तर पाठ सिकेका छन् कि छैनन् भन्ने थाहा पाउन केही समय कुर्नैपर्नेछ।
किन टेर्ने सभापतिलाई?
निर्वाचित वा गुटको प्रतिनिधिका रूपमा मनोनीत पदाधिकारीले सभापतिलाई किन टेर्ने? सुशीलभन्दा बढी मत ल्याएको हुँ भनेर प्रकाशले अवज्ञा गर्न थाले भने पार्टीको अवस्था कस्तो होला? चित्रलेखाले सुशीललाई राम्रै सहयोग गरिनन् भने पार्टी चलाउनै कठिन हुनेछ। पार्टीका लागि चन्दा दिनेहरू ठूला र प्रभावशाली विशेषगरी सरकारी निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्नेलाईमात्र पत्याउँछन्। त्यस अवस्थामा कोषाध्यक्षको पद थपनामा सीमित हुन्छ। अहिलेसम्म त्यस्तै हुने पनि गरेको छ। चित्रलेखाले कोषमा नियन्त्रण गर्न थालिन् र सभापति वा महामन्त्रीलाई अप्ठेरो पर्‍यो भने के गर्ने। त्यति बेला सभापतिले चाहेर पनि कोषाध्यक्षलाई हटाउन त सक्नेछैनन्। पार्टी नै विभाजित हुने अवस्था आयो भने त झन् परिणाम के होला? यस्तै निर्वाचितले मनोनीत पदाधिकारीलाई दोस्रो दर्जाका ठान्ने प्रवृत्ति धेरै संस्थामा देखिएको छ। कांग्रेस यसको अपवाद बन्यो भने आश्चर्य हुन्छ।
छुचुन्द्रो समातेको सर्पको अवस्था
पदाधिकारीको संख्या तोक्ने र तिनको निर्वाचन गर्ने प्रावधान गिरिजाबाबुलाई घेरामा पार्न विधानमा राखिएको हो। गलत मनसुवा राखेर गरिएको त्यस व्यवस्थाले कांग्रेसमा थप संकट ल्याउने देखिएको छ। पदाधिकारीको संख्या सीमित छ तर आकांक्षीहरू धेरै छन्। सुशीलकै सहयोगीलाई भाग पुगेको छैन भने शेरबहादुर देउवा गुटले मोलतोल गर्न थालिसकेको छ। चुनावमा ‘प्यानल' बनाएर लड्नेले हारेको पद पनि चाहिन्छ भन्नु नै अनुचित र नकच्चरो हठ हो तर देउवालाई पनि सहयोगीको चित्त बुझाउने बाध्यता त छ। यसैले विधान मिचेर संख्या नबढाउने हो भने पदाधिकारी विवादले नै सुशीललाई असफल बनाउन बेर लाग्नेछैन। विधान उल्लंघन गरे भने सुशीलको नैतिक पराजय हुन्छ। पार्टीलाई विधिवत् चलाउने घोषणा उनले पटकपटक जो गरेकाछन्।
तराईमा नेतृत्वको संकट
कांग्रेसमा सिंगो तराईलाई नेतृत्व दिने नेता अब कोही रहेन। यसै पनि कांग्रेसले तराईमा जनाधार गुमाएको छ। तराईको समर्थनबिना पार्टी पुनः सत्तामा पुग्न सत्तै्कन। देशव्यापी परिचय भएका मधेसी मूलका नेता विमलेन्द्र निधिले चुनाव हारे। गणेशमानजी २०१२ सालमा सुवर्णजीसँग सभापतिमा हार्नुभयो तर पार्टीमा उहाँको स्थानमा केही फरक भएन। अहिलेको विधानअनुसार विमलेन्द्रलाई सदस्य मनोनीत गरेर पदाधिकारी बनाउन मिल्दैन। विमलकै कदको अर्को मधेसी नेता छैन। कसरी तराईमा संगठन र समर्थन विस्तार गर्ने?
जो चाहिने उनै नहुने हो पो कि?
कांग्रेसका सामु सैद्धान्तिक व्याख्या र संगठनलाई आधुनिक बनाउनुपर्ने चुनौती छ। तर, केन्द्रीय पार्टीका सभापति र महामन्त्री दुवैबाट यो काम त हुनसत्तै्कन। यति बेला पार्टीमा नरहरि आचार्य, भीमबहादुर तामाङ, चक्रप्रसाद बास्तोलाजस्ता नेताले झन् बढी योगदान गर्न सक्थे। तर, प्रदीप गिरी, पूर्णबहादुर खड्का आदिको चक्करमा परेर नरहरि आचार्य र भीमबहादुर तामाङ, चक्र बास्तोलाहरू हारे। यिनलाई उक्साएर उनीहरू देउवा जिताउन र आफू जित्न लागे। संख्याको राजनीतिमा कमजोर साबित भीमबहादुर, नरहरि, चक्रहरू अब भागबन्डामा हुने मनोनयनमा परेनन् नै भने पनि आश्चर्य हुनेछैन। पदाधिकारी त हुन पाउने नै भएनन्। यिनीहरू सुशीलका स्वाभाविक सहयोगी हुनसक्थे।
सुशील कोइरालाका प्रतिस्पर्धी पार्टीभित्रका देउवा वा पार्टीबाहिरका पुष्पकमल दाहाल र झलनाथ खनाल हुन्। चीनको वृद्धि र अमेरिकाको उपभोगलाई उछिन्ने 'सम्भ्रान्त' दिनचर्यामा सुशीलले तिनलाई जित्न सत्तै्कनन्। सुशीलसँग त भीमबहादुर मिल्थे। उनकोे सबैभन्दा नजिक त भीमबहादुर तामाङ हुनुपर्ने हो। तर, विधान, गुटबन्दी आदिले यसलाई सहज हुन दिने छैन। गिरिजाबाबुको हात बाँध्न विधानमा समावेश गरिएको यस व्यवस्थाले समग्र पार्टीलाई कमजोर बनाउने निश्चित् छ। छुचुन्द्रो समातेको सर्पको अवस्थाबाट नेपाली कांग्रेसलाई जोगाउने हो भने यस्ता पराइ प्रावधान विधानबाट हटाउनु उचित हुनेछ।
यस पटकको सकारात्मक पक्ष संगठनमा देशको जनासंाख्यिक संरचनाको अपेक्षाकृत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनु हो। तर, खुला र अञ्चलबाट सदस्य जित्नेहरूको नामले कांग्रेसमा समावेशीकरण यान्त्रिक रहेछ भन्ने देखाएको छ। नेताहरूले निर्वाचनलाई पार्टी कब्जा गर्ने रणनीतिको रूप दिए। विशेषगरी देउवा पक्षका नेता ‘प्यानल' जिताउन बढी नै लागेको देखियो। सायद, यही कारणले केन्द्रीय समितिमा क्षेत्रीहरूको संख्या यति धेरै भएको हो। वैचारिक दृष्टिले जे भए पनि क्षेत्रीहरू नेपाली समाजमा ‘संस्थापना'का प्रतिनिधि हुन्। कांग्रेसकै अधिकांश क्षेत्री नेता कुनै न कुनैरूपमा भारदारी तन्त्र र संरचनामा जोडिएका छन्। केन्द्रीय समितिमा प्रभावकारीरूपमा उपस्थित यस समूहले पार्टीलाई अपेक्षाकृत अनुदार खेमामा पुर्‍याउने खतरा छ। कांग्रेसमा यो अनुदार पक्ष बलियो भयो भने त्यसको प्रभाव राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्नेछ। विश्वबन्धु थापा, हृषिकेश शाह, सिंहध्वज खड्काहरूको उदाहरण कांग्रेसकै हो। यसैले मनोनयनका क्रममा गुटगत सन्तुलन मिलाउने हैन पार्टी र देशको आवश्यकता हेर्न सकेमात्र अहिलेको उपलब्धि सार्थक हुनेछ। कांग्रेसको समावेशी नीति नारामात्र होइन भने मनोनीतबाट वास्तविक सन्तुलन मिलाउनुपर्छ। नत्र, यो देखाउने दाँत साबित हुनेछ।
राष्ट्रिय पञ्चायतको झल्को
केन्द्रीय समितिको निर्वाचन २०३८ सालपछिको राष्ट्रिय पञ्चायतको जस्तो देखियो। व्यक्तिवादी राजनीतिका थुप्रै नकारात्मक विकृति यसमा भित्रिएका छन्। त्यसले निर्वाचन परिणाम पनि प्रभावित भएको छ। केन्द्रीय समितिमा संगत र विगत नराम्रो भएकाहरूको संख्या ठूलै छ। निश्चित् स्वार्थ र महत्वाकांक्षा पूरा गर्न ‘पैसा' खर्च गरेर प्रतिनिधि बन्ने पनि निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचित सदस्यहरूको व्यक्तिगत आचरण स्वच्छ राख्न सायद, सबैभन्दा ठूलो समस्या हुनेछ। अपराध जगत्सँग सम्बन्ध भएकाहरू पार्टीको निर्णयमा प्रभावकारी भए भने नेतृत्व कमजोर हुन्छ। त्यस अवस्थामा सिंगो पार्टी ‘माफिया'मा परिणत हुने खतरा हुन्छ।
पार्टीभित्र भनेजस्तो भूमिका पाएनन् वा पार्टीबाहिर आकर्षक मौका पाए भने अहिलेका ‘विजेता' हरू अर्को महाधिवेशन आउँदा नआउँदै हराउने र ‘हरुवा'ले कांग्रेस धान्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। सुशील कोइराला नेपाली कांग्रेसका विफल सभापति बन्न नचाहने हो भने यस्ता धेरै पक्षमा विशेष सावधान हुनुपर्छ र सन्तुलनप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ। लोकतन्त्रको रक्षाका लागि पनि मधेसमा कांग्रेसलाई पुनःस्थापित गर्न नेतृत्वले सबैभन्दा महत्व दिनुपर्छ। यसैले मधेसका पराजित नेतालाई भए पनि विशेष भूमिका दिएर समेट्नुपर्छ भने अन्यत्र, पार्टी कमजोर भएका ठाउँमा ध्यान दिनुपर्छ। धेरै केन्द्रीय नेता भएका जिल्लामा पदाधिकारी र अरू सदस्य मनोनयन गर्नुको साटो कमजोर जिल्लाका नेतालाई अगाडि सार्नुपर्छ। नत्र, कांग्रेसको यो उत्साह उम्लेको दुध झैँ खेर जानेछ।
Posted by govinda adhikari at 10/03/2010 11:43:00 AM